သင်အသီးအကြောင်း ဘယ်လောက်သိသလဲ ။ | GandaWIN
Home ခံစားမှုရသ Quiz သင်အသီးအကြောင်း ဘယ်လောက်သိသလဲ ။
သင်အသီးအကြောင်း ဘယ်လောက်သိသလဲ ။
ကျွန်တော်က သိပ်ကိုလူသိများတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပေမဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ နှင်းဆီမျိုးစိတ်တူတာကိုတော့ လူသိနည်းကြတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ မျိုးကွဲပေါင်း (၇၅ဝဝ) လောက်ရှိပြီး တရုတ်မှာအများဆုံးထွက်တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုအစိမ်းစားလေ့ရှိပြီး ဖျော်ရည်လည်းဖျော်သောက်ကြတယ်ဗျ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ သိပ္ပံအမည်က musa sapeintum ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ပညာရှိအသီးလို့လဲ ခေါ်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်က ဘယ်ရီအနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး ဗီတာမင် B6 ကြွယ်ဝတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ကျွန်တော်က အစေ့ကနေသီးတဲ့ အသီးမဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်ဘာသီးလဲသိလား….
ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်ရီသီးတစ်မျိုးဗျ။ ကျွန်တော့်ကို အစိမ်းရောင်၊ အမည်းရောင် အနီရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ပန်းရောင် စတာတွေနဲ့ အခိုင်လိုက်တွေ့ရတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူကြိုက်များတဲ့ အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုစားရင် အစာမကြေတာ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တာ၊ ပန်းနာရင်ကြပ်စတာတွေကို သက်သာစေတယ်။ ကျွန်တော်ဘာသီးလဲသိလား….
ကျွန်တော့်မှာ အစေ့အဖြူရောင် ဒါမှမဟုတ် ပန်းရောင်လေးတွေပါတတ်ပြီး ကျွန်တော့်အခွံတွေကတော့ အစိမ်းရောင်နဲ့ အဝါရောင်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ဇာတိက အမေရိက အလယ်ပိုင်းကဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် သိပ်ကိုကောင်းတဲ့အသီးပေါ့။ ကျွန်တော်က နာနတ်သီးထက် အမျှင်ဓာတ်(၄) ဆ ကြွယ်ဝပြီး လိမ္မော်သီးထက် ဗီတာမင်စီ (၄) ဆပိုတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ဘာသီးလဲသိလား….
ကျွန်တော့်ဇာတိက အရှေ့တောင်အာရှကဗျ။ ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ကျွန်တော့်ကို အများဆုံးတွေ့ရတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်တော့်ကိုအဝါရောင် အများဆုံးတွေ့ရပြီး တစ်ခါတလေမှာတော့ အနီရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင် လည်းတွေ့ရတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်ကို မကြိုက်တဲ့သူ မရှိသလောက်ပဲဗျ။ ကျွန်တော်ဘာသီးလဲသိလား….
ကျွန်တော့်ကို အစိတ်လေးတွေနဲ့ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်က အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အပြင် အဆီလည်း ကင်းတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်ကို ဖျော်ရည်ဖျော်သောက်ကြတယ်။ ယိုလုပ်ပြီးလည်း စားကြတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဘရာဇီးလ်မှာ အများဆုံးတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်ဘာသီးလဲသိလား….
ကျွန်တော်ကတော့ အပြင်ဘက်မှာ စိမ်းကားပေမဲ့ အထဲမှာအရည်ရွှမ်းရွှမ်း နီနီရဲရဲအသီးလေးပါ။ ကျွန်တော်ကသခွားသီးနဲ့ မောင်နှမတော်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်ဝမ်းထဲမှာ ရေတွေထည့်ထားရတော့ ကျွန်တော့်ကို သယ်ရပြုရတာတော့ ခက်ခဲတယ်ခင်ဗျ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ အမျိုးတော်တဲ့အသီး (၁၂ဝဝ) ကျော်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်ဘာသီးလဲသိလား….
သင့်အဖြေက ၆/၇ ဆိုရင် သင်ဟာ အသီးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် ဆရာကြီးပေါ့။ I got %%score%% of %%total%% right
အပျိုကြီးဖြစ်နေလို့ စိတ်ပူပေးနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေဖတ်ဖို့…
အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကြိတ်ခံနေမှာလား။ ထုတ်ဖော် တွန်းလှန်မှာလား။
ဆင်ခြေပေးခြင်းက အမှန်တရားကို ဖုံးကွယ်နိုင်လား
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ တစ်ရက်ကို ၁% ပဲပေးပါ။